Ukunceda Umntwana Wakho Khetha Ikolishi Elikhulu
Ukukhetha iKholeji enkulu 101: Umkhokeli wabazali
Yiyiphi, nini & Nceda njani (ngaphandle kokuya yonke i-helicopter)
Ngaphandle kokuba umntwana wakho azi kakuhle into afuna ukuyenza, ukubukela umntwana wakho ukuba ahambe kwinkqubo yokukhetha enkulu kunokuba nzima. Kwaye izinto zihluke ngoku ngakumbi kunokuba zibuyele kumhla wethu. Ngoko ke umkhokelo womzali opheleleyo wokukhetha i-enkulu-yintoni, nini kunye nendlela yokunceda ngayo, ngaphandle kokuphazamisa.
Ukuvakalisa iKhorenji enkulu: Yintoni, nini & njani
Cultura / Frank noHelena / Riser / Getty Izithombe
Iiklasi zaseKholeji kunye neemfuno zokungena kuloo mkhulu zinokuhluka ngokuphawulekayo. Ezinye zivulelekile kumntu onomdla. Abanye bafuna iimfuno ezifunekayo-kwaye ezinye iiphambili ezichaphazelekayo zifuna iincwadana, iiphothifoliyo kunye nodliwano-ndlebe. Ngoko ngelixa inkwenkwe yakho yekholeji inokuba nayo ukuqala komnyaka omncinci ukuyifakela iifom iphepha, kufuneka icinge malunga nento, nini kwaye njani ngoku. (Kwaye kukho ezinye iinkqubo kunye neengxaki ezinxulumene nokulinda ukufakela iphepha elifanelekileyo.) Okunye »
I-Zillion Majors, ii-6 zemfundo
Le mihla, kukho amakhulu emakhulu kwizinto ezivela kwi-astronautics ukuya kwi-viticulture. Kwaye ukuba umfundi wekholeji ezama ukukhetha enye, ayiyihlazo lobutyebi-kukuhlazola. Ngethamsanqa, ezo nkoleji zeekholeji zonke ziyawela ezintandathu zemfundo ezibanzi, kubandakanywa ubugcisa, isayensi, i-shishini kunye nezifundo zendalo. Ngoko upheqa uluhlu ngendawo yokuqala yezemfundo, uze uhlalutye kwizinto ezithile. (Ukuba akukho nto, izihloko ezinjenge-astronautics kunye ne-viticulture ziya kukunika ubuninzi bokuxoxa ngazo.) Okunye »
Akhankanywa! Uncedo lweClueless and Unecided
Yona msebenzi wakho wekliniki yokukhetha yakhe enkulu. Yakho kukukhuthaza nokumxhasa kule nkqubo. Kodwa xa umntwana wakho ebiza umnqweno kwi-2 uyaxhala ngenxa yokuba akakwazi ukugqiba isigqibo, okanye akaqinisekanga, okanye akazi apho uqala khona, ngokuqinisekileyo, ufuna ukwenza into. Ngoko ke iziphakamiso kuwo wonke umntu, ukusuka kwintsana engenamdla kumntu ofuna ukunciphisa intsimi. (Ingane yakho yenza isigqibo, kodwa awuqinisekanga ukuba kukho na ke iingcebiso malunga naloo nto.) Ngaphezu koko »
Iimbali eziphindwe kabini kunye nabantwana abafakwe emaphaketheni babengenanto abantu abaninzi abaye bayenza emva kwee-1970 kunye ne-80s. Ngoko ukuba ufuna ukuvuselelwa ngokukhawuleza kwizinto ezi zinto, uya kufumana isikhokelo sobhaliso apha: iiguqu, abantwana kunye nezikhulu eziphindwe kabini. Kaninzi "
Abaculi abanenkwenkwezi, Abangenalusizo kunye neyezinye iikholeji ezinkulu
UMthetho weLibrari. Ifoto ngu-Ian Waldie / Getty Izithombe
Aw, c'mon. Yivume. Unemibono ethile yeengcamango zeekholeji. Ukholelwa ukuba abaculi baya kulamba, abagwebi baya kuba yimpumelelo, kwaye ukuba iikholeji enkulu yengane yakho iya kugqiba ikamva layo. Ukukhetha ukhetho lukhulu kakhulu, kodwa izihlandlo zitshintsha-kwaye ezininzi zeembono zakho zangaphambili zinyani. Kaninzi "
Imiqamelo, izilumkiso kunye nezibonelelo
Iincinci ezimbalwa zokugqibela ezinokugqithiswa kunye neengcingo. Iingcebiso ezingakumbi malunga nokufumana uncedo kwikampus. Ingane yakho inokutyelela umcebisi wakhe wezemfundo sele sele ihlawule ukutyelela kwiziko lezemisebenzi, ixubushe kunye nomfundi we-grad, kwaye ifumene i-lowdown ephezulu kubantu ababaziyo ngokwenene? Kaninzi "
Ezicacileyo zoMculo noBugcisa ubuGcisa
Ngobubele uJohn Siebert, i-Stock.Xchng Photos
Abaculi, i-thespians, abadansi kunye nabaculi bajongene neemfuno ezihlukileyo ezahlukeneyo ekusebenziseni ezo zikhulu. Ukuba umntwana wakho ungumculo ophezulu okanye umdlalo ophezulu, le ngqangi-I-Admissions yeKholeji ye-Music & Drama Majors-iya kuyiphendula imibuzo yakho malunga ne-conservatory vs. issue college, i-audition, izicelo kunye nokunye. Ukufumana ulwazi malunga nezikolo zobugcisa, iiphothifoliyo, kunye nenkqubo yesicelo, funda i-College Admissions 101 ye-Art Majors. Kaninzi "
Izikolo zeNew Top Drama ezikwi-United States
I-Northeastern Photo Photo Tour
I-Sacramento State University University Tour Tour
Kutheni Ndingaboni I-PHP Code Xa Ndijonga Umthombo?
Iingcamango zokuhlobisa iintlanga
Ukuthenga i-Certified Certified Pre-Owned Car Usetyenziswe nge Costco
Uninzi lweeMidlalo kwiiMidlalo zeeNdwendwe
I-Kiva - i-Ancestral Pueblo Iimpawu zemiCeremoni
Ukuzalwa kweTshayina: Bhiyozela iSuku lokuzalwa lokuShayina
Ngubani ophethe umthwalo wobufakazi?
Ukudibanisa iiSatifiketi eziSiseko kwizicelo zeDelphi
IZikhism Iinkolelo ezisisiseko kunye nemiSebenzi ye-FAQ
4 Izinketho zokuguqulela amaSilayidi kwiFomati yeDivaysi
Kutheni iinqununu kufuneka zakha Ubudlelwane kunye nabazali
Ibhomu ephezulu kunazo zonke emhlabeni
Hydronium Ion Inkcazo
Kufuneka Ufunde Ukuba Uthanda 'I-Hobbit'
Amalungelo Abantu eNyakatho Korea